အပူပိုင်းရေခဲပြင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ 14 Cool အရာ
သိပ္ပံ စီမံကိန်းများ & စမ်းသပ်မှု
by အန်းမာရီ Helmenstine, Ph.D ဘွဲ့ကို
အပူပိုင်းရေခဲအလွန်အမင်းချမ်းအေးဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းကလည်းအေးပဲ! သငျသညျခွောကျသှေ့ရေခဲသုံးပြီးကြိုးစားနိုင်စိတ်ဝင်စားဖို့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းများအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ...
အပူပိုင်းရေခဲပြင် Fog Cool
ခြောက်သွေ့သောရေခဲမြူအောင်ဂန္ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒရူးသည့် WB Leonard / Getty Images
အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း, ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲနှင့်အတူလုပ်ဖို့နေဆဲအအေးဆုံးအရာတစျခုမှာရေနွေးတစ်ဦးကွန်တိန်နာသို့တစ်ဦးအတုံးဆမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ခြောက်သွေ့ရေခဲခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲမြူထုတ်လုပ်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ (အခိုးအငွေ့သို့လှည့်) sublimate မှဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကပေါ်ပြူလာပါတီအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောပူပြင်းတဲ့စည်ပိုင်းထဲမှာခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲအဖြစ်ခြောက်သွေ့သောရေခဲနဲ့ရေအများကြီး, အများကြီးရှိသည်ဆိုပါကသူကတောင်ပိုပြီးအံ့မခန်းပါပဲ။ နောက်ထပ် "
ခြောက်သွေ့သောရေခဲ၏ထိုလုံးလေးများသည်လေထဲတွင် sublimating နေကြသည်။ ရစ်ချတ်ဝီ
တချို့ကကုန်စုံစတိုးဆိုင်ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲရောင်းပေမယ့်အများကြီးမကျင့်။ သငျသညျခွောကျသှေ့ရေခဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအေးမြသောအရာအချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ဖို့ပါ! နောက်ထပ် "
အပူပိုင်းရေခဲပြင် Crystal Ball ကို
သငျသညျအင်ျကြီကိုရေနှင့်ပူဖောင်းဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတစ်ဦးကွန်တိန်နာ အကယ်. မျိုးတစ်ဦးကြည်လင်ဘောလုံးကိုနဲ့တူအောင်နေတဲ့ပူဖောင်းရပါလိမ့်မယ်။ အန်း Helmenstine
ပူဖောင်းဖြေရှင်းချက်င်တစ်ဦးပန်းကန်သို့မဟုတ်ဖလား၌ခြောက်သွေ့သောရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းချထားပါ။ ပူဖောင်းဖြေရှင်းချက်နဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါစိုစွတ်သောနှင့်ဆင်တူကြောင်းဧရာပူဖောင်းစကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ trapping, ပန်းကန်လုံး၏နှုတ်ခမ်းကိုဖြတ်ပြီးကဆွဲထုတ် တစ်ဦးကြည်လင်ဘောလုံးကို ။ နောက်ထပ် "
သူတို့ pop မတိုင်မီအပူပိုင်းရေခဲပူဖောင်းအေးခဲဖို့လုံလောက်တဲ့အအေးဖြစ်ပါတယ်။ marianna armata / Getty Images
အေးခဲ နေတဲ့ဆပ်ပြာပူဖောင်း ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကျော်။ အဆိုပါပူဖောင်းကို float မှပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ခြောက်သွေ့ရေခဲအုပ်သောလေထုထဲတွင် ။ သင်ကပူဖောင်းကောက်ကဆနျးစစျနိုငျသညျ။ နောက်ထပ် "
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လေထုထက်ပိုလေးဖြစ်တယ်, ဒါခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပူဖောင်းများမဟုတ်ဘဲ float ထက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်။ ဖျူး / Getty Images
တစ်ဦးပူဖောင်းအတွင်း၌ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။ ခြောက်သွေ့ရေခဲသူတော်ကောင်းတရားသကဲ့သို့, ပူဖောင်းထမှုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျခွောကျသှေ့ရေခဲလွန်းကြီးတွေတစ်အပိုင်းအစကိုသုံးပါလျှင်, ပူဖောင်း pop မည်! နောက်ထပ် "
ခြောက်သွေ့သောရေခဲ sublimating ထံမှဖိအားတစ်ခုပူဖောင်းကဲ့သို့ချိတ်ပိတ်ပလပ်စတစ်လက်အိတ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ စတူးဝပ် McClymont / Getty Images
အလားတူပင်, သင်ကရာဘာစေးများသို့မဟုတ်အခြားပလပ်စတစ်လက်အိတ်သို့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဝတ်နှင့်အပိတ်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်နိုင်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့ရေခဲအဆိုပါလက်အိတ်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ယင်း၏ဓာတုဗေဒပိုမိုရှုပ်ထွေးပေမယ့်တစ်ဦးကကြယ်တံခွန်တစ်ခုညစ်ပတ် snowball အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ Francesco Reginato / Getty Images
1 လီတာရေ2ခွက် (ဖုန် 1 ဇွန်းစီဓါတ် (ကိုမှန်ကန်ယျတံခှနျအတွက်မတွေ့ရှိအတူတကွကြယ်တံခွန်ရရှိထားသူ) 1 ဇွန်းရည် (ကြယ်တံခွန်အော်ဂဲနစ်အစိတ်အပိုင်း) 1 ဇွန်းရှာလကာရည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဘို့ ) 1 ဇွန်း အရက်ပွတ်နယ် (အစစ်အမှန်ယျတံခှနျအတွက် Methanol ကဲ့သို့)
လက်အိတ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်အကြမ်းအားဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲ၏5ပေါင်ထည့်ပါ။ အနည်းငယ်ပိုရေကိုထည့်သွင်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ စာနယ်ဇင်းအတူတကွပလပ်စတစ်အမှိုက်အိတ်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ။ အများဆုံးယျတံခှနျမှောင်မိုက်တ္ထုများမှာကတည်းကသင်, ဖုန်နှင့်အတူသင်၏ချောကြယ်တံခွန်မွမှေုနျ့နိုငျသညျ။ တကယ့်ကြယ်တံခွန်လိုပဲ, သင့်မော်ဒယ်ဓာတ်ငွေ့ဂျက်လေယာဉ်ကိုချွတ်ပစ်မည်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်မှအလားတူဖွဲ့စည်းမှုရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ NASA ရဲ့ Jet Propulsion Lab ကမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဤသည်သွေ့ခြောက်သောရေခဲဗုံးပေါက်ကွဲပြီးတစ်ဦးက high-speed ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ Dantheman3141
တစ်ဦးကွန်တိန်နာသို့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပိတျထားသောကြောင့်ကွဲစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလုံခြုံဆုံးဗားရှင်းတဲ့ pop အဖုံးနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှတစ်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်သေတ္တာကလေးသို့မဟုတ်အာလူးချစ်ပ်သို့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစနေရာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
တစ်ကိတ်မုန့်တစ်ဦးဆေးလိပ်မီးတောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေရေခဲခြောက်မှရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ သငျသညျ '' ချော်ရည်က 'ကိတ်မုန့်များ၏နှစ်ဖက်ချစီးဆင်းချင်လျှင်သင်အနီရောင် jello သို့မဟုတ် tinted icing ကိုသုံးနိုင်သည်။ အန်း Helmenstine
သငျသညျခွောကျသှေ့ရေခဲမစားဘဲနေလို့ရပါတယ်နေစဉ်, သငျသညျအစာကိုတစ်အလှဆင်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ဤစီမံကိန်းများတွင်ခြောက်သွေ့ရေခဲနေတဲ့မီးတောင်ကိတ်မုန့်တစ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုထုတ်လုပ်သည်။ နောက်ထပ် "
တစ်ဦးဟယ်လို jack ကို-o'-မီးအိမ်ခြောက်သွေ့ရေခဲနဲ့ရေထားပါနှင့်ပျော်စရာစတင်ပါစေ !. အန်း Helmenstine
တစ် Make အေးဟယ်လို ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲမြူ spews ကြောင်း jack ကို-o'-မီးအိမ်။ နောက်ထပ် "
ဒါဟာသင်ပူဖောင်းဖြေရှင်းချက်သို့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း drop အခါသင်ရတယျ။ အန်း Helmenstine
ပူဖောင်းဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းချထားပါ။ မြူ-ဖြည့်ပူဖောင်းဖွဲ့စည်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုအလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ဖြန့်ချိ ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲမြူ တစ်ဦးအေးမြအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သော။ နောက်ထပ် "
ကာဗွန်အပူပိုင်းရေခဲပြင် Ice Cream
ကခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲကို အသုံးပြု. အေးခဲသောကြောင့်ဤအချောကလက်ရေခဲမုန့် bubbly နှင့်ကာဗွန်ဖြစ်ပါတယ်။ အန်း Helmenstine
သငျသညျစေရန်ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲကိုသုံးနိုင်သည် လက်ငင်းရေခဲမုန့် ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်, ဖြန့်ချိသည်ရလဒ်ရေခဲမုန့်မျိုးကိုတစ်ဦးရေခဲမုန့်ကတော့ float ကဲ့သို့ bubbly နှင့်ကာဗွန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
သီဆို Spoon အပူပိုင်းရေခဲပြင်စီမံကိန်း
တစ်ဦးကဇွန်းသီချင်းဇွန်းသရုပ်ပြဖျော်ဖြေများအတွက်ဂန္သတ္တုအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နီးပါးမည်သည့်သတ္တုအရာဝတ္ထုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျော့ခ်ျဒို / Getty Images
ခြောက်သွေ့သောရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆန့်ကျင်မည်သည့်သတ္တုအရာဝတ္ထုနှိပ်ပါကတုန်ခါပြုသကဲ့သို့သီချင်းဆိုရသို့မဟုတ်ဆူညံအော်ဟစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် "
ကာဗွန် Fizzy အသီး
သငျသညျကာဗွန်နိတ်အသီးအောင်ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲနှင့်အတူလိုက်သည်ကိုသီးသောအသီးရောမွှေလို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ fizzy အသီးကိုစားသို့မဟုတ်အချိုရည်အဘို့အ fizzy ရေခဲ Cube အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ ယောဟနျသ Foxx / Getty Images
ခြောက်သွေ့သောရေခဲကိုအသုံးပြုပြီးစတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်အခြားအသီးအေးခဲ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ Bubbles က fizzy နှင့်ကာဗွန်အောင်, အသီးထဲတွင်ပိတ်မိဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ် "
ဖုတ် Powder ကြော်
Aragonite crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
ပိုတက်ဆီယမ် alum သို့မဟုတ်ပတ္တမြား crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း
Leidenfrost Effect ဆန္ဒပြ
မီးခိုးတစ်မီးတောင်ထဲကလာကြ Make ရန်ကဘယ်လို
ပျားလပို့ကိုဓာတုဗေဒ Candy ကြော်
တစ်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းခေါင်းစဉ်ကို Select လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
10 Cool ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှု
Hot မေပယ်ရည် Ice Cream Make - မော်လီကျူး Gastronomy
Thermite တုံ့ပြန်မှု - ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဓာတုဗေဒ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် Make လုပ်နည်း
Cómo pedir la extension က de ဗီဇာက de turista y ကcuálesသား Las opciones
လမ်းများ, တူးမြောင်း, ဆိပ်ကမ်းများနှင့်မြစ်ချောင်းများအပေါ်အဲလ်ဘတ် Gallatin ရဲ့အစီရင်ခံစာ
အဆိုပါကန် Effect ကဘာလဲ?
စပိန်အတွက် '' ဖုံးကိုဓားရှည် '' အသုံးပြုခြင်း
7 ကံမကောင်းစွာ Leotards
2017 များအတွက်ထိပ်တန်း 100 ခရစ်စမတ်သီချင်းများ
Vasant Panchami များ၏သမိုင်း, ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားမ Saraswati ၏မွေးဖွားခြင်း
ပြင်သစ်တွင် '' ကြောင် '' အဘို့အနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုခြင်း6ပျော်စရာဖော်ပြချက်
အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အခြေခံ Element တွေကို
တောင်းပန်ဖို့ကိုဘယ်လို: Quotes နှင့်အတူ "ငါသည်စိတ်မကောင်းပါဘူးတယ်" ဟုပြောပါ
Chevy တာဟိုးချဲ့ Block နှင့် Orifice Tube တည်နေရာများ
အငြင်းအခုံစာစီစာကုံးပြင်ဆင်နေ: ပြဿနာတစ်ခုနှစ်ဖက်စလုံး Exploring
High School တွင်အကြီးတန်းများအတွက်ထိပ်တန်း 10 စာအုပ်များ
Period table တွင် Element ကိုသင်္ကေတကိုသုံးပြီးလုပ်စကားလုံးများကို
အရောင်းခွန် calculate ကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ
Commercial Bank ကာတာနိုင်ငံမာစတာ
ထုတ်လုပ်သော, ရွေ့ပြောင်း, နှင့် Prefab နေအိမ်
ပထမကမ္ဘာစစ် / II ကို: သင်္ဘော USS Arkansas ပြည်နယ် (BB-33)